အိပ်မက်ည | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » အိပ်မက်ည
Posted by နိုင်နိုင် on May 31, 2011 in Copy/Paste | 8 comments
အိပ်မက်ဆိုတော့လဲ အိပ်မက်လိုပါပဲ နိုးထလာချိန် တစ်ညလုံးမက်ခဲ့တဲ့ အကြောင်းရာတွေက တကယ်မဟုတ်မှန်းသိခဲ့ရတယ်။ အဲဒီညက ဘာအကြောင်းမှမတွေးပဲ မက်ခဲ့တဲ့ အိပ်မက်စစ်စစ်လေးတစ်ခုပေါ့။ အိပ်မက်စစ်လို့ပြောရခြင်းက ဒီလိုပါ တစ်ခါတရံတွေမှာ အိပ်ပျော်ခါနီးတွေးခဲ့တဲ့ အကြောင်းရာတွေဟာ စွဲလန်းစိတ်နဲ့ အိပ်မက်ဆိုတာကလဲ မက်တက်တယ်မလား ခုတော့ ကျွန်တော့်မှာ အလွတ်မက်တဲ့ အိပ်မက်စစ်စစ်ပေါ့ဗျာ။ကျွန်တော် သိပ်ချစ်ရဲ့တဲ့ ကောင်မလေးရှိတယ်ဗျ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဘ၀မှစပြီး ယခုထိတိုင်ပါပဲ အဲဒီအချိန်သူက သူ့ဖေဖေပြောင်းရွှေ့ရာအရပ် သရက်မြို့မှနေပြီး မကွေးသက္ကသိုလ်ကျောင်းတော်ကြီးမှာ အဆောင်နေပြီးတက်ခဲ့တယ် အဲဒီချိန်မှာ ကျွန်တော်ကလဲ မြစ်အနောက်ဘက်ကမ်း စကုမြို့ ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာ နေပြီး မကွေးသက္ကသိုလ်မှာ အဆောင်နေကျောင်းသားအဖြစ်တက်ခဲ့တယ်လေ။ချစ်သူဖြစ်သွားခဲ့ကြတယ် ကျောင်းတွေပြီးလို့ ခွဲသွားကြရတယ် မကြာမကြာ တစ်လတစ်ခါလောက်တော့ ဖုန်းလာတက်ပါတယ် ကောင်မလေးဆီက အခုဆိုဖုန်းမလာတာလဲကြာပြီ။ အိပ်မက်က ခုမှစတာ…:D မှတ်မိတဲ့အပိုင်းစလေးတွေပါ ကောင်မလေးက ကျွန်တော်နဲ့ဝေးသွားတာကြာပြီလေ သူဘယ်မှာနေတယ်ဆိုတာတော့ သိပါတယ် အိပ်မက်မှာ ကျွန်တော်မေ့သွားတယ် သူတကယ်လက်ရှိနေထိုင်ရာအ၇ပ်ကို။အိမ်မက်ထဲမှာ သူရောက်နေတဲ့အရပ်က ကျွန်တော့်အိမ်နဲ့ကပ်နေတယ် ခေါင်းရင်းဘေးအိမ်ဖြစ်နေခဲ့တယ် ကောင်မလေးတို့မိသားစု အဲဒီမှာ အိမ်ငှားနေကြတယ်။ ကျွန်တော် မသိခဲ့ဘူး အဲဒီမှာနေတာ တစ်နှစ်ခန့်လောက်ကြာနေပြီပေါ့ အကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့် သူဒီမှာရှိနေတာကို သိလိုက်ရချိန် ကျွန်တော် သွေးပျက်သွားသလို ရင်တွေအရမ်းခုန်စေခဲ့တယ် တစ်နှစ်လောက်အကြာတောင် ကျွန်တော်နားမှာ သူရှိနေတာကို မသိခဲ့ဘူး (ကောင်မလေးမှာ အကျင့်ရှိပါတယ် ကျောင်းတက်စဉ် အိမ်မှာနေတာတွေမှအစ အပြင်ထွက်လေ့မရှိဘူးလေ)သူကျွန်တော့်နားမှရှိရတဲ့အကြောင်းရင်းက ဒီလိုပါ သူ့မိဘတွေက ဓါတ်ပုံ print ထုပ်ဖို့ဆိုပြီး ကျွန်တော်ဆီ အဲဒီပုံတွေရောက်လာတော့တာပါပဲ အဲဒီပုံတွေကြည့်ပြီး ကျွန်တော် အချိန်ကြာ အံ့အားသင့်နေခဲ့မိတာပေါ့။စုံစမ်းကြည့်လိုက်တော့မှ ကောင်မလေးတို့မိသားစုဟာ ကျွန်တော့် အိမ်ဘေးမှာနေတာ သိလိုက်ရတယ် ကျွန်တော်လည်း အိမ်ကမိဘတွေကိုပြောပြလိုက်ပါတယ်။ အဲလိုနဲ့ ဓါတ်ပုံတွေ print ထုပ်ပေးလိုက်တယ်။ ဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်သိပ်ချစ်ရဲတဲ့ကောင်မလေးနဲ့ ပြန်ဆုံရဖို့ကြိုးစားပါတော့တယ်။ သူဖေဖေ ရုံးသွားတယ် အိမ်မှာ ကောင်မလေးတို့မိသားစုကျန်နေခဲ့တယ် ကောင်မလေးမေမေကလဲ ဈေးသွားသုံးတယ်လေ အိမ်မှာ ညီမနှစ်ယောက်ကျန်နေခဲ့တယ် ဒါနဲ့ ကျွန်တော် ခြံဝန်းနားကပ်ပြီး အခြေနေကြည့်နေတယ် ကောင်မလေး ညီမနဲ့တွေ့တယ် ကောင်မလေးညီမကလဲ ကျွန်တော်တို့ချစ်သူတွေ ဖြစ်နေတာဆိုတာ သိထားပြီးသားပါ။တကယ်ဆို မကောင်းဘူးဗျာ (ကျွန်တော့်အိမ်အနားမှာသူရောက်လာတာ တစ်နှစ်ခန့်လောက်ရှိနေပြီ ကျွန်တော့်ကို အသိမပေးဘူး သူဒီတိုင်းနေနိုင်ခဲ့တယ်)နောက်ပိုင်းမှာတော့ ကျွန်တော်သူနဲ့မကြာမကြာတွေ့ဖို့ ကြိုးစားခဲ့တယ် ကြာလာတော့ မိဘတွေသိလာတယ် နှစ်ဘက်လုံးသဘောတူကြပါတယ် ကျွန်တော့်အိမ်ကိုလဲ ကောင်မလေးလာလည်ပါတယ် ကျွန်တော် သူ့ကိုအိမ်ပြန်မလွတ်ချင်တော့ဘူး အိမ်ချင်းကလဲ ကပ်နေတယ် လူကြီးတွေလဲသဘောတူပြီးသား သို့သော် ဘာကြောင့်လဲမသိဘူး ကောင်မလေးကို အိပ်ပြန်မလွတ်ချင်တော့ဘူးပေါ့….ကျွန်တော်နားက ထွက်ခွားသွားမှာ အပြီးပျောက်ကွယ်သွားမှာကိုကြောက်နေလို့ပါပဲ ..အဲလိုနဲ့ အဲလိုနဲ့ ကျွန်တော် အိပ်ရာက နိုးထချိန်ဖြစ်မယ်ထင်တယ် အသိစိတ်တစ်ခုပေါ်လာတယ် ဖုန်နံပါတ်တစ်ခုပါ သူ့ဖုန်းနံပါတ်က(——)ပါ လက်ရှိသူရှိနေတဲ့အရပ်က(——-)ဖုန်းနံပါတ်ကုတ်တွေလဲမတူဘူးလေ ဒါတစ်ခုခုလွဲမှားနေတာဆိုတာ ကျွန်တော်သိလိုက်ချိန်မှာ အိပ်ရာက နိုးထလာပါပြီ ကျွန်တော်အိပ်မက်မက်နေခဲ့တာပါပဲ…တကယ်ပဲ ကျွန်တော်အနားမှာ သူမရှိဘူး မိုင်းချီဝေးတဲ့နေရာမှာ ကောင်မလေးတကယ်ရှိနေခဲ့တာပါပဲ။ ဝေးနေရမှာကြောကလို့ ဝေးနေရတာလား အနာမှတဖ၀ါးမှ မခွာရှိနေချင်ခဲ့လို့လား….အိမ်မက်ဟာ အိမ်မက်တိုင်းပဲ နံနက်မိုးလင်းချိန်မှာ တကယ်မဟုတ်မှန်းသိခဲ့ရတယ် မကြာပါဘူး ကျွန်တော်လည်း ဆိုင်ဖွင့်ဖို့အတွက် အိပ်ရာမှထပြီး နေ့စဉ်လုပ်စဉ်အတိုင်းလုပ်ရင်း အလုပ်မှာ လုပ်နေခဲ့ရပါပြီ။ ဒီအိပ်မက်ညဟာ ကျွန်တော့်အတွေးတွေကို ဒီလောက်နဲ့တင်ရပ်တန့်စေမှာမဟုတ်ပါဘူး။
စလိုက်ပါ့လား… ဘ၀သစ်ကို။ ။
ဌာနမှ ယာယီပိတ်ထားပါသည် ….
လွန်ပါစေ အလွမ်းညတွေ………..လွန်ပါစေ လွန်ပါစေ……..လွန်ပါစေ အလွမ်းညတွေ………..လွန်ပါစေ လွန်ပါစေ……..လွန်ပါစေ အလွမ်းညတွေ………..လွန်ပါစေ လွန်ပါစေ……..
တနေ့က ရွှေအက်ဖန် က ၀တ္တုတွေ ရွတ်ပြတဲ့ အစီအစဉ်မှာ မင်းသိင်္ခ့ ၀တ္တု အသစ်တခု ထွက်လို့ ဖတ်ပြသွားတာ ဇတ်လမ်းကလည်း အဲလို ခပ်ဆင်ဆပ်ပဲ.. အိမ်မက်ထဲမှာ တွေ့ကြတဲ့ ပုံစံလေး။ တော်တော် နီးစပ်တယ်။
မင်းသိင်္ခ နဲ့တိုက်ဆိုင်နေပုံပဲ ဒါဆို စိတ်ဝင်စားတယ်ဗျာ အဲဒီဝတ္ထုလေး ဖတ်ကြည့်ချင်တယ် ရှိရင် တင်ပေးပါလား သို့မဟုတ် ကျွန်တော့်မေးကိုပို့ပေးလို့ရမလား အသစ်ဆိုတော့လဲ အွန်လိုင်းပေါ် ရောက်သေးဘူးထင်တယ်နော် ဆူး ကျွန်တော့်အိပ်မက်ကတော့ (အုန်းကျွန်း)နော်…:D
ကျွန်တော့်အိပ်မက်ကတော့(အုန်းကျွန်း)နော်…:D ဆိုပြီး …ပို့စ်မှာ Copy/Paste cate ထည့်ပေးထားတယ်နော်…။
ဗျို့ သဂျီး …….အိပ်ငိုက်နေလား ။နောက်တယောက်ကလည်း … ခေါင်းစဉ်တူ အကြောင်းရာနှစ်ကြောင်းဖြင့် ရှင်းလင်းစွာ ပို့စ်တင်ထားပါကြောင်း …. ။
etone ပြောတဲ့ copy /past မှန်ပါတယ် ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် ကျွန်တော့်ဘလော့ကိုတင်ဖို့အတွက် word နဲ့ အရင်ရိုက်ပါတယ် မေးထဲမှာ ရေးရတာအဆင်မပြေလို့ပါ။ဒါကြောင့် word နဲ့ရိုက်ပြီး မေးထဲကို past လိုက်ပါတယ် နောက်ထပ် ဂဇတ် ကိုလဲ past လိုက်ပါတယ် အဲဒါကြောင့်ပါ။ကျွန်တော့်ဘလော့ မှာတော့ http://www.royalcherry.blogspot.com ခေါင်းစဉ်နာမည်ကို “မွန်လေး သို့ အိပ်မက်ည” ဆိုပြီးတင်ထားပါတယ် တကယ့်(အုန်းကျွန်းပါ)/ ကျွန်းပေါ်မှာ အုန်ရည်သောက်တာဟုတ်ဝူးနော်…:D